OweHelix Cup nethuba lokuziveza
ANGASE athole ithuba lokudlala uLucky Mohomi uma iMamelodi Sundowns seyibhekene neKaizer Chiefs emdlalweni weShell Helix Cup eFNB Stadium, ngoMgqibelo
IMAMELODI Sundowns neKaizer Chiefs kulindeleke ukuthi basebenzise umdlalo weShell Helix Ultra Cup ukuhlola abadlali abangakalitholi ijezi kule sizini ukuthi ngabe sebekulungele yini ukusiza la maqembu emidlalweni emqoka.
Umdlalo ungoMgqibelo eFNB Stadium ngo-4 ntambama. Umdlali weSundowns, uLucky Mohomi ungomunye wabadlali okubhekwe ukuthi bazibonakalise kulo mdlalo.
UMohomi kuke kwanda amahlebezi athi angase abolekiswe yileli qembu ngenxa yokungalitholi ijezi.
Ngesizini edlule ube nomdlalo owodwa kuphela kumaBrazilians. Endaweni ayidlalayo kukhona ukaputeni uHlompo Kekana, Tiyani Mabunda, Andile Jali kanjalo no-Oupa Manyisa.
Uyavuma ukuthi uke wayicabanga eyokubolekiswa kodwa umqeqeshi uPitso Mosimane wathi kusamele asebenze.
“Lo mdlalo ngicabanga ukuthi uyithuba elihle kubadlali abangadlali ukuthi bathole imizuzu enkundleni. Hleze bazokwazi ukukhombisa umqeqeshi ukuthi sebekulungele ukudlala,” kusho uMohomi.
Mayelana nokungayishiya iSundowns uthe uMosimane ukhombise ukukholelwa kuyena.
“Umqeqeshi ungitshelile ukuthi usakholelwa kimina. Kufanele ngibhukule ukuze ngilwele indawo yami ngenxa yezinga eliphezulu lokuncintisana kuyona. Okunye wukuthi ngibuye ngahlushwa nawukulimala. Ngithemba ukuthi kuzofika umdlalo sengisesimeni esifanele ukudlala bese ngikhombisa ukuthi sengilinyusile izinga,” kusho Mohomi obegijima kwiFree State Stars kumasizini adlule.
Ngasohlangothini lweChiefs kukhona abadlali abanjengoKabelo Mahlasela nabo abangakalitholi ijezi ngaphansi kuka-Ernst Middendorp.
UWillard Katsande yize eseke walithola ithuba emidlalweni ye-Absa Premiership, lapho iChiefs izihola khona phambili kodwa akasazitamuzeli ijezi njengakuqala.
Ucashunwe kwi-website yaMakhosi ethembisa ukuthi bazimisele ngokugcina umgqigqo wabo wokuwina kulo mdlalo neSundowns.
“Lo mdlalo muhle kakhulu ekusigcineni sisesimeni esihle sokudlala. Senza kahle ngakho asifuni ukulahlekelwa wumgqigqo wethu. Sizoya emdlalweni ngokukhulu ukuzimisela ukuze sinikeze abalandeli into ezobajabulisa,” kusho uKatsande.
Ngesizini edlule umdlalo unqontshwe yiSundowns ngo 2-1.
IChiefs ngeke igcine ngokudlala kwiShell kuphela kule mpelasonto, ngeSonto izohlangana neBloemfontein Celtic kwiMacufe Cup.